Honningsvag. Elvebakken N 5 (Igumbi lokulala 3)
Wamkelekile e-Elvebakken! Yindlu enemigangatho emibini emi emantla e-Honningsvag enemibono emihle ye-bay kunye neenduli. Inamagumbi okulala ayi-5 aneebhedi ezimbini inye kunye negumbi lokuhlambela eli-2, enye kumgangatho ngamnye. Indlu inazo zonke izinto ezinokufunwa ngumhambi ukuze azive ekhululekile, nokuba luhambo lokuphumla kunye neshishini.
Yindlu eyi-175 m2 enemigangatho emi-2 kunye namagumbi okuhlambela amabini, enye emgangathweni. Indlu inamagumbi okulala ama-5 kodwa ama-3 kuphela e-Airbnb, ibe yigumbi lokulala eli-1 elikhulu kunegumbi lokulala lesi-2 kunye nelesi-3. Indlu ineembono ezimangalisayo kwaye ukuba kukho izibane ezisemantla unethuba elihle lokuyibona ukwithafa!!
Yindlu yomntu ngamnye encotsheni yeeNduli zeHonningsvag.
Sisebumelwaneni emantla esixeko, indawo entle kakhulu enemibono engakholelekiyo kufutshane nevenkile enkulu kunye nesikhululo segesi, kwindawo ezolileyo nenoxolo.
Ukuba bafuna ulwazi lwabakhenkethi sinokubonelela, ngokokwazi kwethu isixeko kunye nesiqithi kakuhle.